Rasaasa News – Jaaliyadda DDSI ee Qatar oo Qabtay Kulan Lagu Dardar Galinayo Wax Qabadka Jaaliyadda Iyo Xulashada Guddiga Cusub ee Jaaliyadda
on February 27, 2012 4:43 pm
Doxa, Feb 27, 2012 [ras] – Jaaliyadda DDSI ee Dalka Qatar ayaa iskugu timid shir aad u ballaadhan. Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay Jaaliyaddu sida; odayaasha, dhalinyarada, culimada diinta iyo cuqaasha bulshada ku dhaqan Dalka Qatar.
Sida caadada u ah jaaliyadda DDSI ee Qatar iyo dhamaan dadka muslimiinta ahba shirku wuxuu ku bilawday wacdi diini ah oo kooban, wacdigaas oo uu soo jeediyay Sheekh Maxamed Askar. Wacdigaas oo runtii ahaa mid aad u qiimi badan dhamaan dadkuna ay aad ugu dhag raariciyeen.
Wacdigaa kooban ka dib, waxaa isaguna war bixin waafi ah oo ku saabsan waxqabadkii jaaliyadda halkaas ka soo jeediyay Gudoomiyihii hore Xuseen Cabdi Sarhaye. Gudoomiyuhu wuxuu warbixintiisa ku sheegay in xilkii gudoomiyanimo ee uu jaaliyadda u hayay uu ku koobnaa muddo hal sano ah isla markaana uu xilkiisii dhamaaday .
Jaaliyadda DDSI oo halkaas ku dhamayd firfircooni badanina ka muuqatay, ayaa xilkii si buuxda u gudoontay isla markiina waxaa si buuxda oo fartaag ah loo doortay gudi dhamays tiran oo ka kooban todoba xubnood.
Sheekh Axmed Khaliif oo ka mid ah Cuqaasha iyo Culimada jaaliyadda, ayaa isaguna hadal aad u qiimo badan ka soo jeediyay shirka, Sheekhu wuxuu aad ugu baraarujiyay jaaliyadda isaga oo si kulul uga hadlay wax qabadka jaaliyadda iyo in gacmaha la is qabsado.
Ugu danbayntii shirkii ayaa ku dhamaaday jawi dagan oo farxad badani ay ka muuqatay.
Magacyada Gudiga la doortay iyo hawlaha ay bulshada u qaban doonaan oo faahfaahsan dib ayaan ka soo sheegi doonaa.